हातले टेकेर ३ किमि दूरी पार - समसामायिक | Kantipur TV HD
हातले टेकेर ३ किमि दूरी पार
मानिसलाई हातले हिँड्न कत्तिको सम्भव र सहज हुन्छ ? अवश्य पनि यो कठिन काम हो । तर, दाङका युवा ऋषि परियारले भने हात टेकेर तीन किलोमिटरसम्मको दूरी पार गर्न सक्छन् ।
दाङ तुल्सीपुरका २७ वर्षीय युवक ऋषि परियार हातले टेकेर तीन किलोमिटरसम्म हिड्छन् । समथर ठाउँमा मात्रै होइन उकालो आरालोमा पनि उनी सजिलै हिड्छन् । यस्तो कसरी संभव भयो त ?
हातले हिडेर विश्व रेकर्ड राख्ने परियारको लक्ष्य छ । गिनिजी विश्व रेकर्डमा बेलायतका साराह च्यापम्यानले सन् २००२ मा पाँच किलोमिटर आठ घण्टामा हातले पार गरेको रेकर्ड छ । मेहनत र आत्मविश्वासले आफू सफल हुनेमा परियारको विश्वास छ ।
१४ वर्षदेखि उनले यो प्रयास गरिरहेका छन् । अभ्यासका लागि नियमित साँझ बिहान राप्ती राजमार्गमा जान्छन् । ठाँउ अभावले साागुरो र गाडी ओहोरदोहोर गर्ने सडकमा ज्यान जोखिममा राखेर उनले एक्लै निरन्तर अभ्यास गर्दै आएका छन् ।
दश रोपनी जग्गा हडपेर ग्यारेज, क्याफे र उद्योग सञ्चालन
सम्पत्ति शुद्धीकरणका ५५ प्रतिशत मुद्दाको फैसला अभियुक्तका पक्षमा
जग्गा अतिक्रमणको तथ्य बाहिरिएपछि विशेष लेखापरीक्षण गर्ने महालेखाको तयारी
पिउने पानीमा समेत परनिर्भरता बढ्दै